HAWEENKA BANADIR OO BAAQ U DIRAY KOOXAHA DAGAALAMAYA
MUQDISHO: Ururka Haweenka Nabadda iyo Dib u Heshiisiinta Soomaaliyeed ee [HANAD] ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Muqdisho iney dagaalada joojiyaan markii ay Shir jaraa’id ku qabteen gobolka Banaadir.
Haweenka HANAD ayaa sheegay in dagaalada Muqdisho ka soconaya aan wax guulo ah laga gaareynin marka laga reebo in shacabka taagta daran lagu baabi’iyo Naftooda iyo Hantidooda, laguna barakiciyo. sidaas darteedna ay haboon tahay in shacabka laga daayo dagaalada ba’an ee ka soconaya Muqdisho.
Haweenka Nabada iyo Dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee HANAD,ayaa sheegay in haween ahaan ay aad uga daqnanayaan dagaalada daba dheeraaday ee ku dhawaadka 4ta sano ka soconaya koonfurta Soomaaliya, maadaama dhibaatada ugu badan ay taabaneyso Haweenka iyo Caruurta.
Haweenka ayaa shirkooda Jaraa’id ugu baaqay dowladda KMG Soomaliya iyo kooxaha Mucaaradka ah, iney shacabkooda u naxaan, ayna muhiim tahay iney is walaashadaan oo ay iskugu yimaadaan miiska wada hadalka iskuna tanaasulaan si loo dhameeyo dagaalada.